आज २०७७ साउन ७ गते बुधबार, यस्तो रहनेछ तपाईको आजको दिन, कुन राशिलाई कस्तो योग छ ? — sancharkendra.com
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि सुन्दर पहिरनका साथ व्यक्तित्व निखार्ने अवसर जुट्नेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव प्राप्त हुनेछ भने सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। कमजोरी सुधार गर्दै फाइदा उठाउने समय छ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाटको अवसर जुट्नेछ। अवसर प्राप्त भए पनि भूलवश काममा बाधा होला। दिउँसोदेखि आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुन सक्छ।
रक्षाबन्धनको यस्तो दुर्लभ योगका कारण चम्कियो यी राशिहरुको भाग्य, कतै तपाइको त परेन ?
आज इतिहासकै दुर्लभ सूर्यग्रहण, कुन राशिले हेर्न मिल्ने कुन राशिले नमिल्ने ?